Baarlamaanka Somaliya oo ka heshiisyey mugdigii ay ka muujiyeen shirkii Kenya.
Posted by admin on April 19 2011 18:48:41
Mogdisho:(hiranstate.com)- Shirar maalmahani ugu socday magaalada Mogdisho xildhibaanada baarlamaanka Somaliya oo iyagu fikir ahaan ku kala tagay shirkii Kenya ayaa ugu danbeyn qilaafkii dhinaca fikirka ahaa xaliyey.
Mogdisho:(hiranstate.com)- Shirar maalmahani ugu socday magaalda Mogdisho xildhibaanada baarlamaanka Somaliya oo iyagu fikir ahaan ku kala tagay shirkii Kenya ayaa ugu danbeyn qilaafkii dhinaca fikirka ahaa xaliyey.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa inta badan iyagu qeyliya marka uu wadanka ka maqan yahay gudoomiyaha baarlamaanka kedibna marka uu soo laabto u hogaansama waxkasta oo uu u keeno qeyr iyo qasaaraba, iyagoo maanta ka heshiiyey fikir kala duwanaantii iyo mad madowkii shirkii Kenya.
Dhinaca kale gudiyadii dhawaantan loo xilsaaray iney soo diyaariyaan amaba qaban qaabiyaan doorashada soo socota ee lagu dooranayo madaxweyne Somaliyeed iyo gudoomiye barlamaan ayaa ugu danbeyn lagu wadaa iney howlahooda shaqo u gutaan sidii la rabay iyagoo ilaalinayo waqtiga loogu talo galay howshooda.
Dalka Somaliya oo ay colaado ragaadiyeen ayna isku dagalayaan quwado aan Somali aheyn ayaa lagu wadaa inuu ka baxo xiliga kumeel gaarka, si ay shacabku u helaan dowlad rasmi ah bisha Ausugt ee inagu soo aadan waa sida la qorsheynayo.